यो चमत्कारी रोटीको साथ तपाईंसँग made 45 घर बनाउने रोटी हुनुपर्दछ, पहिले जस्तो, यसको क्रन्ची क्रस्ट र नरम क्रुम्बको साथ।
चामल सूप क्लैमको साथ
तिमीलाई भात मन पर्छ? त्यसोभए तपाईंले यस क्लैम राइस चाउडर चलाउनु पर्छ। यो सरल को रूप मा सरल छ।
लसुनको साथ चिकन ड्रमस्टिक
तपाईको थर्मोमिक्सले बनेको यी लसुन कुखुराको जांघहरू उत्तम र स्वादिष्ट सासको साथ हुन्।
यस Riojan सूप नुस्खा संग तपाईं एक पौष्टिक र लगातार डिश हुनेछ। थर्मोमिक्सको साथ सजिलैसँग बनाइएको एउटा चम्चा थाल
Thermomix को साथ2व्यंजनहरु एक्सप्रेस गर्नुहोस् !! हाम्रो नयाँ ईबुक
New० मिनेट भन्दा कममा बनाउनको लागि new० अविश्वसनीय नयाँ रेसिपीहरूको साथ Thermomix को लागि हाम्रो नयाँ एक्सप्रेस रेसिपी पुस्तक पाउनुहोस्। Introdu०% मा विशेष परिचय प्रस्ताव!
समुद्री समुद्री खानाले भरिएको सम्पत्तीले तपाईलाई यसको क्रन्ची बनावट र झिंगा र सिपीहरूमा आधारित स्वादिलो ​​भर्नले तपाईंलाई चकित पार्नेछ।
स्मोक्ड साल्मन रोलहरू टमाटर विनाग्रेटको साथ ईल्सले भरिएका थिए
यी साल्मन रोल कुनै पनि अवसरको लागि उपयुक्त छन्। तिनीहरू पनि सजिलो छन् र स्वादको संयोजन स्वादिष्ट छ।
गाजर र मटर सासका साथ मीटबलहरू
गाजर र मटर सासका साथ यी स्टीम्ड मीटबलहरू रसदार र हजुरआमाहरू द्वारा बनाइएकै धनी हुन्छन्।
क्यान्डी मिर्च टार्टलेट्स
तपाईं जन्मदिनमा, कुनै पार्टीमा कुनै पनि प्रकारमा क्यान्डेड मिर्च टार्टलेटहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
निलो पनीर क्रोसकेट्स विन्लो ससका साथ
यी निलो पनीर क्रोकेट्स विन्लो ससका साथ स्वादहरूको यति ठूलो संयोजन छ कि यसले तपाईंको पाहुनाहरूलाई चकित पार्नेछ।
नौगट अर्ध चिसो
त्यो अर्ध चिसो नौगटको साथ तपाइँ तपाइँको Thermomix को साथ बनाउन चाँडो र सजिलो क्रिसमस मिठाईको मजा लिन सक्नुहुन्छ।
मार्जिपनले सुख्खा फलहरूको साथ काट्छ
के तपाईं सुक्खा फलको साथ केहि स्वादिष्ट मार्जिपन स्यान्डविच चाहनुहुन्छ? Themmix को साथ स्वादिष्ट, मूल र धेरै चाँडो बनाउन।
नौगट तीन चकलेटहरू
यो तीन चकलेट नौगटको साथ तपाईं एकै समयमा सबै प्रकारको चकलेटको मज्जा लिन सक्नुहुन्छ ताकि तपाईंको क्रिसमस उत्तम छ।
क्रिसमस रूख बच्चाहरूसँग क्रिसमसको बिदाका लागि पकाउनको लागि एक उत्तम Thermomix नुस्खा हो।
यो stollen जर्मन खाना को एक विशिष्ट क्रिसमस मिठाई संग आफ्नो पाहुनाहरु चकित गर्न उत्तम छ।
क्रिसमस हिउँ लग
क्रिसमसका लागि हिउँको लग एक नुस्खा हो जुन तपाईं आफ्नो मनपर्ने भर्नको साथ बनाउन सक्नुहुन्छ ताकि तपाईं १००% रमाइलो हुनुहुनेछ।
बदाम र नरिवल म्यानटेकाडोस
यी स्वादिष्ट बादाम र नरिवल मन्टेकाडोस एक क्रिसमसको मिठो मिठो मिठाई हो जुन तपाईं आफ्नो नुस्खा पुस्तकमा मिस गर्न सक्नुहुन्न।
घरेलु रोस्कन डे रेइसमा सबै क्रिसमस स्वाद छ। यदि तपाईं घरमा मिठाईहरू तयार पार्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले यो थर्मोमिक्स रेसिपी प्रयास गर्नुपर्नेछ।
क्यान्डेड फल प्लम-केक
हामी तपाइँलाई तपाइँको थर्मोमिक्सको साथ यस क्यान्डेड फल प्लम-केक कसरी बनाउने भनेर देखाउँदछौं। स्वादिष्ट र सजिलो असम्भव।
पेड्रो Ximénez सॉसको साथ नुनको साथ सुँगुरको मासु
पेड्रो Ximénez सॉसको साथ नुनको साथमा सुँगुरको मासु एउटा सरल तरीकाले भोरोमा बनाईन्छ र जहिले पनि विजय हुन्छ।
थर्मोमिक्समा बनाइएको दुई कुकहरूमा सुँगुर पिसाउनको लागि यो नुस्खाको साथ, तपाईं आफ्नो पाहुनाहरूलाई वास्तविक शेफ जस्तो देख्नुहुनेछ।
सुन्तला र दालचिनी सॉसको साथ पोर्क टेंडरलिन
सुन्तला र दालचीनी सासको साथ यस पोर्क टेंडरलोइनको साथ तपाईं एक स्वादिष्ट पकवानको रमाईलो गर्नुहुनेछ जहाँ मिठो र नुन मिसाइन्छ,
मासु र pate cannelloni
मासु र पाटेको यी धनी cannelloni को लागी आदर्श हो जब हामी खान धेरै पाहुनाहरु छन्। ती अग्रिम गर्न सकिन्छ।
कावामा हाकको लागि यो नुस्खा स्वादिष्ट छ। यसको चटनीको साथ सेवा दिनुहोस् ताकि तपाईंको पाहुनाहरूले यसको स्वादको र प्रशंसा गर्न सक्दछन्।
घुमाउरो आकारको डोनट्स
ट्विस्टेड डोनट्स बनाउनको लागि अर्को मूल र फरक तरीका। पत्ता लगाउनुहोस् कि तिनीहरू कती सजिलो बनाउनको लागि र उनीहरू कति स्वादिष्ट छन्।
पिज्जा खाने अर्को तरिका, किनकि हामी साना पिज्जा बनाउनेछौं, हामी तिनीहरूलाई भर्नेछौं र हामी तिनीहरूलाई कद्दूको आकार दिनेछौं।
यो एप्पल कम्पोट केक बनाउन वा केक र क्रेप्स भर्न प्रयोग हुनेछ। एक्लै वा टोस्टमा खान पनि !!
बादलको साथ कद्दू पाई
बादल, दालचिनी र क्रीम: केहि धेरै विशेष सामग्रीको साथ एक स्वादिष्ट कद्दू पाई कसरी बनाउने यो झर्ने कुरा याद नगर्नुहोस्
पोर्तुगाली क्रोइसन्टले तपाईंलाई यसको ब्रोक जस्तो बनावट, कोमल र शराबीले छक्क पार्नेछ। एक रमाईलो नास्ताको लागि आदर्श।
चकलेट द्वारा मृत्यु
को मिठो चकलेट मृत्यु चाहँदैन? हेलोवीन रात को लागी केहि डरलाग्दो brownies।
पेपिटोस वा क्रीमको साथ xuxos
यस नुस्खामा तपाईं केहि धेरै नरम र फ्लफि सानो पेपिटोहरू कसरी बनाउने सिक्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूसँग एक विशेष विशेष क्रीम हुनेछ।
बोक्सी औंलाहरू (सर्टब्रेड कूकीज)
केहि सर्ट ब्रेड बोक्सी औंलाहरू बनाउन तयार हुनुहुन्छ? नतीजा स्वादिष्ट रूपमा भयावह छ!
के तपाइँसँग केक बनेको छ र यसलाई हेलोवीन केकमा बदल्न चाहानुहुन्छ? हामी तपाईंलाई यसलाई सरल तरीकाले सजाउने तरिका देखाउँदछौं।
कफी क्रीम संग चकलेट कप
हामीले स्वादिष्ट कफ्री क्रीमले भरिएको सरल चकलेट मगहरू सिर्जना गरेका छौं। पत्ता लगाउनुहोस् कि तिनीहरू के गर्न सजिलो छ।
नेल्बा चावल एक नुस्खा हो जुन तपाईं Thermomix को साथ बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यो तपाईंले काम गर्न र घरबाट टाढाको खानाको मजा लिन सक्नुहुन्छ।
तिरामिसु डबल पनीर केक
दुई क्रीम चीज र स्पन्ज केकको एक तहको साथ बनाईएको यो फरक डेजर्ट सिर्जना गर्नुहोस्। यसले तपाईंलाई निर्विवाद तिरामिसुको सम्झाउने छ।
Crème Brûlèe केक
कसैले कल्पना पनि गर्न सकेन कि क्रिम ब्रुली केक जस्तो बनाइन्छ र यहाँ तपाईंसँग अन्तिम नतीजा छ, एक धेरै स्वादिष्ट मिठाई।
प्रोफाइलरको साथ चकलेट र कफी केक
प्रोफाईलर्सको साथ यो चकलेट र कफी केक Thermomix को साथ बनाउन को लागी धेरै सजिलो छ। सबैको पहुँच भित्र एक ग्यारेन्टी सफलता!
यो एप्पल पाई परम्परागत भन्दा धनी छ तर तपाईंको Thermomix लाई धन्यवाद दिन धेरै सजिलो छ।
बेक्ली म्याकोरोनी मिर्चको गेडाहरू ग्रेटिनसँग
चिली गेडाहरू वा चिली कोन कार्नेको साथ अतुलनीय मकारोनी, सुपर रसिलो र स्वादिष्ट, पनीर ग्रेटिनको साथ पकाइएको
स्ट्रबेरी निम्बू केक
यदि तपाइँ नरम र चिसो मिठाई मन पराउनुहुन्छ, हामीलाई थाहा छ कि यी कपकेकहरू तपाईंलाई पूर्ण रूपमा अपील गर्दछन्। तिनीहरू आटा संग बनेका छन् ...
झिल्ली र ब्रोकोली टेम्पुरा विशेष सोया सॉसको साथ
ब्रोकोली र झींगा टेम्पुरा एक विशेष सोया सॉसको साथ, एक स्वादिष्ट नुस्खा जसले तपाईंलाई यसको स्वाद र सरलताको साथ आश्चर्यचकित गर्नेछ।
झींगा र zucchini सॉसको साथ लेमन Tagliatelle
झींगा र zucchini सॉस संग स्वादिष्ट र अविश्वसनीय नींबू Tagliatelle। एक स्वादिष्ट, द्रुत र धेरै सजिलो रेसिपी।
स्याउ संग ला viña पनीर केक
तपाइँ लाजोआबाट यसको पनीरको प्यारोको स्वाद र दालचीनीको साथ यसको स्याउको टुक्राको लागि मनपर्नुहुनेछ।
Zucchini र crunchy हेम संग खरबूजा क्रीम
एक धेरै मौलिक क्रीम zucchini र खरबूजबाट बनेको र एक स्वादिष्ट क्रन्ची ह्यामको साथ
पिस्ता ब्राउनी कुकीहरू
यी डार्क चकलेट पिस्ता ब्राउन कुकीहरू स्वादिष्ट हुन्छन्। तपाईं यसको शराबी बनावट मनपर्नेछ।
बदामको साथ बनाइएको माहुरीको केक
एक आकर्षक सानो माहुरीको केक। यसको हास्यास्पद कीराहरूले तपाईंलाई पनीर र आडू स्वादको साथ यो स्वादिष्ट मिठाई बनाउन साहसी बनाउँदछ।
खुबानी संग दही केक
खुबानीको साथ दही केक, एक स्वादिष्ट मिठाई जुन तपाईं आफ्ना पाहुनाहरूसँग साझा गर्न सक्नुहुनेछ व्यक्तिगत प्याकेजको साथ प्रेमले।
फ्रिजन्स पच र चीज टार्ट
यदि तपाईं यस गर्मीमा उत्कृष्ट केक बनाउन चाहनुहुन्छ भने, हामी यो नुस्खा सुझाव दिन्छौं जुन स्वादिष्ट छ। यो एक आधार बाट बनेको छ ...
चुराको साथ एप्पल पाई
एक स्वादिष्ट स्याउ र बदाम स्वाद संग एक केक। यो राम्रो मिठाई एक मक्खन र चिनी crumble संग यसको crunchy स्पर्श प्राप्त गर्नेछ।
ताजा कागती स्पंज केक
यो यस गर्मीमा चिसो हुनका लागि उत्तम केक हो। यसको नरम र शराबी संरचना को एक स्वादिष्ट क्रीम संग ...
साल्मोरजोको साथ प्यापिलटमा स्वोर्डफिश
साल्मोरजो ईन्डो फिश एन प्यापिलोटको साथ, एक हल्का, छिटो, सरल डिश जुन अग्रिममा तयार पार्न सकिन्छ र धेरै सस्तो छ।
Truffle सॉसको साथ पोटोबोलो मशरूमहरूको साथ पूर्ण अनाज स्पेगेटी
लसुन र ह्यामको साथ पोर्टोबेलो मशरूमको साथ स्वादिष्ट सम्पूर्णग्रेन स्पगेटी ट्रफल सॉसको साथ प्रस्तुत गरियो। एक अद्भुत मुख्य कोर्स।
चकलेट meringue केक
यो चकलेट meringue केक उत्तम संयोजन हो। चकलेट स्वाद र meringue संग यसको बनावट व्यावहारिक तरीकाले यस मिठाई नरम हुनेछ।
यो पोलिश मूलको एक उत्कृष्ट केक हो, विभिन्न प्रकारको आटा र बनावटको साथ र आइसक्रीम स्वादको साथ असाधारण भर्ने। तपाईंको परिणाम उत्तम छ
ब्रुचे आटाको साथ पाल्मिरेटस
जान्नुहोस् कसरी महान ब्रियोचो आटाको साथ स्वादिष्ट पाल्मिरेट्स बनाउने। तिनीहरू मुखमा रमाईलो छन् र एक नरम र फ्लफि ब्याटरको साथ बनेका छन्।
सबै भन्दा राम्रो चकलेट केक
एक उत्कृष्ट अपवादको स्वादको साथ चकलेट केक। तिनीहरूको स्पन्ज केक तयार गर्न सजिलो छ र धेरै शराबी र तिनीहरूको बटरक्रिम उत्तम छ।
स्याउ भरिने ब्रीको रोटी
यो कोमल ब्रियो रोटी आटा नुस्खा दर्शनीय छ। यसको मीठो स्वाद छ त्यसैले तपाईं यसको साथ साना स्याउ भरिन सक्नुहुन्छ।
बिस्कुटको डबल लेयरको साथ चीज़केक
हाम्रो थर्मोमिक्सको साथ चीजको केक सिक्नुहोस् जुन तपाईंलाई स्प्रिश्कार गर्दछ। यो कुनै चुली बिना नै बनेको हुन्छ र कुकी र स्ट्रबेरी जेलीको डबल लेयर हुनेछ।
दही सिजर सॉसको साथ चिकन र पास्ता सलाद
एक धेरै पूर्ण पास्ता सलाद: कुखुराको मासु, रंगीन घुमाउरो, टोस्ट र यो सबैको साथ एक स्वादिष्ट दही सिजर चटनी।
स्वादिष्ट दही केक
एक प्राकृतिक दही स्वाद संग एक धेरै स्वादिष्ट केक। हामी सुन्तला र स्वाद क्रीम र दही को भरिने संग एक आटा संग केक गठन गर्नेछौं।
क्यान्डेड सुन्तलाको साथ केक रोल
क्यान्डेड सुन्तलाको साथ यो केक रोल एक चमत्कार हो। यो एक क्रीम चीज र क्रीम र एक रसदार स्वाद स्पंज केकको साथ बनाईएको हो।
सुपर XXL चिकन बुरिटो
सुपर XXL चिकन बुरिटो ग्वाकामोल, खट्टा क्रीम र पिको डी ग्यालोको साथमा छ। साथीहरूसँग साझा गर्नको लागि उत्तम डिनर।
बदाम क्रीम संग Dumplings
यी बन्स एक सरल तरीकाले केक बनाउनको लागि सरल र सबै भन्दा मूल तरीका हो। यसको स्वाद यो विशेष बदाम क्रीमको साथ आदर्श हुनेछ।
उत्तम गाजर केक
यो उत्तम गाजर केक, क्लासिक र एक हो जुन कठोरता र प्रयासको साथ बनाईएको छ र एक धेरै स्वादिष्ट केकमा सिर्जना गरिएको छ।
गाजर र अनानास केक मलाई चीज चीजको साथ
यो उत्तम विधि हो। यदि तपाईं यो आश्चर्यजनक बनाउन प्रयास गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईं यसको उत्कृष्ट र चिल्लो स्वादले गाजर र अनानासको साथ आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ।
प्रोफेटरोलहरू र ट्रफल्ड क्रीमको साथ फ्रिटरहरू
हाम्रो Thermomix को साथ धेरै सजिलो तरिकामा कसरी लाभदायक र पकाउनेहरू बनाउने सिक्नुहोस्। यो समान आटा द्वारा बनाईएको एक नुस्खा हो र तपाईं यसको सहजताबाट चकित हुनुहुनेछ
आयरिश सोडा रोटी वा बेकिंग सोडा रोटी
आयरिश सोडा रोटी वा बेकिंग सोडा रोटी घर बनाउनको लागि एक हावा हो। यो खमीर लिदैन, न त यो समय आराम गर्दछ र यो घुँडाईएको छैन।
धेरै शराबी ईस्टर प्यारी
ठेठ ईस्टर मोना बनाउन सिक्नुहोस् जुन लेन्टमा तयार पारिएको हो। हाम्रो रेसिपीको चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस् र तपाईले देख्नुहुनेछ कि यो सजिलो छ उत्तम परिणामको साथ
एक ला riojana पंक्तिबद्ध गर्नुहोस्
तपाईंको थर्मोमिक्सको साथ तपाईं सजिलैसँग यो स्वादिष्ट रिओजन टेंडरलोइन तयार गर्न सक्नुहुन्छ। Minutes० मिनेट भन्दा कममा तयार र सहजै।
चिकन र मटर नूडल पुलाव
मटर र कुखुराको साथ छिटो र सजिलो चाउचाउ केसरोलको लागि हामीलाई खानाको साथ समस्याबाट बाहिर निस्कन आवश्यक छ। यो स्वस्थ र स्वादिष्ट पनि छ।
पिज्जा रोटी, एक स्पन्जी र स्वादिष्ट आटा
यस साधारण आटाको साथ तपाईं सुपर कोमल र रसीला रोलहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईंसँग स्वादिष्ट पिज्जा बनाउने तरिका पनि छ।
स्विस चार्ट आमलेट सेरानो हेम, चीज र टमाटरले भरिएको छ
पनीर, सेरानो हेम र प्राकृतिक टमाटरले भरिएको स्विस चार्ट ओमलेट। बच्चाहरूलाई चार्ट खानको लागि सजिलो र स्वस्थ र उत्तम यो अनुभूति नगरी!
केराबाट बनेको स्वादिष्ट केक र साथ क्रीम चीज र स्वादिष्ट oreo कुकीज। यो हाम्रो Thermomix को साथ गर्न को लागी धेरै सजिलो हुनेछ।
ताहिनी सॉसको साथ ग्रिल सामन
ताहिनी-आधारित चटनीको साथ रसदार र स्वादिष्ट ओभन-भुनी सामन। सब भन्दा उत्तम र सजिलो मुख्य कोर्स।
पेस्ट्री क्रीमको साथ Brioche बन
केहि धेरै कोमल दूध बन्स ताकि तपाईं आफ्नो Thermomix को साथ बनाउन सक्नुहुन्छ। एक धेरै विशेष स्वाद र पेस्ट्री क्रीम को एक भर् को साथ तिनीहरूलाई juicier बनाउन
चमेली चावल ब्लूबेरी र काजूको स्वादको साथ
चमेली चामल ब्लूबेरी र काजूको स्वादको लागि, मासु र माछाको लागि बिभिन्न गार्निश। रंगीन, स्वादिष्ट र नाजुक
हम्मस सॉसको साथ साल्मन, काकडी र क्विनोआ टार्टारे
हम्मस सॉसको साथ साल्मन, काकडी र क्विनोआ टार्टारे। एक उत्कृष्ट, रंगीन र उत्कृष्ट स्टार्टर। यो स्वाद र बनावट को एक धेरै मूल संयोजन हो।
स्ट्रबेरी क्रीमको साथ कपकेक्स
केहि शानदार स्ट्रबेरी स्वादयुक्त मफिनहरू। तिनीहरू एक धेरै विशेष बटर क्रीम संग सुगन्धित संग सजावट छन् ...
चिनी ग्लेजको साथ पकाइएको डोनट्स
तपाईलाई बनाउन र बेक गर्न यहाँ केहि स्वादिष्ट डोनट्स छन्। यसको स्वाद दर्शनीय छ र तिनीहरू धेरै कोमलता बाहिर आउँछन् ...
भ्यालेन्टाइन डे को लागी हार्ट केक
धेरै खास दिनको रूपमा भ्यालेन्टाइन डेको लागि धेरै नै मूल केक। यो बिस्कुट र चीज र माखन को एक महान क्रीम संग बनेको छ।
मीठा आलु सॉसको साथ गोमांस स्टू
मिठो आलु सासको साथ यो गोमांस स्टूको साथ तपाईं स्वादले भरिएको पारम्परिक नुस्खाको आनन्द लिनुहुनेछ। तपाइँको Thermomix को साथ गर्न सजिलो।
नीबू क्रीम र meringue साथ Abyssinians
केहि स्वादिष्ट अबिसिनियनहरू निम्बूको क्रीमले भरिएका छन् र यसको मीठा मीरिंग्युले सजाइएको छ कि हामी यसलाई ब्लोटरचले समाप्त गर्नेछौं यसलाई उत्कृष्ट बनाउन।
बीट र चकलेट स्पन्ज केक
यो बीट र चकलेट स्पन्ज केक यति स्वादिष्ट छ कि तपाईं यसको आश्चर्यजनक सामग्री बिर्सनुहुनेछ। यो Thermomix को साथ गर्न पनि धेरै सरल छ।
स्ट्रबेरीको साथ Tart
तपाईले हेर्न सक्ने सब भन्दा मनपर्दो केकहरू मध्ये एक। यसले यसको उत्कृष्ट सामग्री, स्वाद, रंग र मौलिकता समावेश गर्दछ। बारेमा…
चोरिजो र मन्चेगो चीज चीज
नरम र अर्ध-ठीक मान्चेगो चीजको उत्कृष्ट संयोजनको साथ रसिलो र स्वादिष्ट चोरिजो र मन्चेगो चीज चीज। खाजाको लागि आदर्श।
स्ट्रबेरीको साथ क्रिम ब्रुले
एक उत्तम र धेरै चिल्लो क्रीम, चीज र क्रीम र चिनी को crunchy परत संग बनेको। भरिने क्रममा हामी प्रामाणिक मिठाईको लागि स्ट्रबेरीहरू परिचय गराउँदछौं।
मिनी मेक्सिकन चिकन तोस्तडस सोया सॉस र चिपोटल चिलीको साथ
मिनी मेक्सिकन चिकन टोस्टाडास सोया सॉस र चिपोटल चिलीको साथ, कुनै पनि खाना शुरू गर्नको लागि उत्तम डिश वा एपेटाइजर: स्वादिलो ​​र हल्का।
कफी लिकूरको साथ चकलेट केक
एक चकलेट स्पंज केक र कफी लिकुरको साथ बनेको केक जुन चकलेट चटनी र ट्रफल्ड क्रीममा नुहाउँदा रसदार स्पर्श हुन्छ।
कद्दू, सुन्तला र दालचिनी जाम
यो कद्दू, सुन्तला र दालचिनी जाम र तपाइँको Thermomix को साथ तपाइँ एक साधारण तरीकाले स्वादिष्ट पेटू उपहार बनाउन सक्नुहुन्छ।
ओभन बिना ताजा नींबू केक
एउटा कागती सुगन्धित चीज। यो पाचन र ताजा छ, यी दिनहरूको लागि यति ठिक पनि उत्कृष्ट ...
भरिएको टर्की लासग्ना
यस स्वादिष्ट भरिएका टर्की लासाग्नाको साथ तपाईंले थर्मोमिक्सको साथ सरल र सजिलो तरिकामा छुट्टिहरूमा छोड्नुभएको मासुको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ।
Brioche रोलहरू प्राकृतिक दहीको साथ बनेको
केहि बन्स साधारण सामग्रीहरू द्वारा बनाईएको र कोको क्रीमले भरिएको, बिहानको खाजा वा नास्ताको लागि आदर्श हो।
धेरै स्वादिष्ट चकलेट क्रिसमस लग
यो सरल क्रिसमस लग यस छुट्टीको लागि हाम्रो टेबलबाट हराउन सकेन, यो अझै तारा मिठाई हो, यसलाई राम्रो मेनूको साथ साथ गर्न सक्षम हुन।
धेरै कोमल र स्वादिष्ट बन
तपाईंको ब्रेकफास्ट वा स्नैक्सको लागि केही रोलहरू धेरै कोमल र एक स्वादिष्ट स्वादको साथ। पत्रका चरणहरू अनुसरण गर्दै तपाईले धेरै नरम बनहरू पाउनुहुनेछ
रातो भेलवेटको साथ कुकी बारहरू
चकलेट बिस्कुटको दुई तह र रातो रंगको क्रीम चीजको एक तहको एक स्वादिष्ट संयोजन। मिश्रण क्रिसमसको लागि उत्तम छ।
चामल पुडिंग र मार्जिपन
यहाँ तपाईंसँग एक धेरै स्वादिष्ट मिठाई छ त्यसैले तपाईं यस क्रिसमसको लागि तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। बारेमा…
Thermomix को साथ बनेको गाजर जाम द्रुत र तयार गर्न सजिलो छ। पिउन वा उपहारको रूपमा दिनको लागि एक स्वादिष्ट संरक्षण।
पनीर घुमाउरो पम्पकिन स्पन्ज केक
हामी हाम्रो गर्मीको समयको फाइदा लिन्छौं कद्दूले पकाउने बनाइराख्न। मैले यस स्पेशल इन्ग्रेडियन्टको साथ स्पन्ज केक बनाएको छु र ...
चीज र कद्दूको उत्तम संयोजनको साथ एक उत्तम केक। Buttered बिस्कुट को एक आधार संग बनेको र क्रीम चीज संग सजाइएको।
भेगन कद्दू कस्टर्ड
Thermomix को साथ बनेको यी शाकाहारी कद्दू कस्टर्ड छिटो, सस्ता र हल्का हुन सक्दैन। सम्पूर्ण परिवारको लागि मिठाई।
चकलेट क्रीम कब्रिस्तान
चकलेट क्रीमको साथ बनेको कब्रिस्तान र कुचल oreo कुकीजले सजाइएको। धेरै हास्यास्पद भने यदि हामी यसलाई चिहान र जेली सिमीले सजाउँदछौं
अण्डाहरू ह्युमस, बाख्रा पनीर र कालो जैतूनको साथ भरिएका छन्
अण्डाहरू ह्युमस, बाख्रा पनीर र कालो जैतूनको साथ भरिएका छन्। केहि फरक शैल अण्डा, स्वादिष्ट, क्रीमयुक्त र तयार गर्न धेरै सजिलो।
माल्ट हिज्जे चकलेट मफिनहरू
केहि स्वादिष्ट चकलेट मफिनहरू। धेरै पाचन किनभने यसले राई र हिज्जे र धेरै जुसियर समावेश गर्दछ किनकि यसले सुगन्धित जैतुनको तेल समावेश गर्दछ।
चकलेट एप्पल ओटमील कुकीहरू
चकलेट र एप्पलको स्वादिष्ट स्वादका साथ केहि कुकीहरू। ओट फ्लेक्स र एक आटा बनाइन्छ जब बेक्दा बाहिर कोमल र कुरकुरा हुनेछ।
Oreo flavored brownnie
चकलेटको स्वाद नछाडिकन र oreo कुकीज र सेतो चकलेटको विशेष मिश्रणको साथ, अत्यन्तै रसीला स्वादको साथ भव्य ब्राउनिड बनाइएको छ।
यो साधारण नुस्खाको साथ तपाईं सिक्नुहुनेछ कि कसरी मासुको मासुले भरिएको स्वादिष्ट केक बनाउने। तिनीहरू सुंगुरको मासु द्वारा बनेका छन् ...
दलिया केला चकलेट चिप कुकीज
दलिया र केराले बनेको स्वादिष्ट र स्वस्थ कुकीहरू, धेरै फाइबरको साथ एक ऊर्जावान संयोजन। यो अझै एक हो ...
के तपाईंले कहिल्यै मासु फिदेउ को प्रयास गर्नु भएको छ? यो पनि स्वादिष्ट छ। यस अवस्थामा, समुद्री खाना वा तरकारीहरूको सट्टामा, तपाईं ...
नमकीन कारमेल सॉसको साथ चीज़केक
Thermomix र बेक्ड को साथ बनेको उत्तम चीज़केक मध्ये एक, नुनिलो स्पर्शको साथ एक स्वादिष्ट कारमेल सहित, यसको मिश्रण अविश्वसनीय छ।
Thermomix को साथ बनेको स्वादिष्ट चिपोटल सॉस जुन तपाईं आफ्नो परिवार र साथीहरूको लागि मेक्सिकन र टेक्स-मेक्स व्यंजनहरू तयार गर्न सक्नुहुनेछ।
सुन्तला र अदुवा ग्लेजको साथ साल्मन फिललेटहरू
विदेशी, स्वादिष्ट, स्वस्थ र स्वादिष्ट, तपाईं एक नुस्खाबाट के माग्न सक्नुहुन्छ? यो सबैको लागि हाम्रो विधि छ ...
क्रैनबेरी दही क्रीम मफिनहरू
दही क्रीम र क्रनबेरीको साथ बनाईएको स्वादिष्ट र फ्लफि मफिनहरू। एक धेरै स्वस्थ, प्राकृतिक नुस्खा र तयार गर्न धेरै सजिलो।
निम्बू नरिवल केक
यस स्पन्ज केकलाई नेत्रो सुगन्धित पानीले पोख्ने बनाउनको लागि अर्को भिन्न तरीका पत्ता लगाउनुहोस्। यो क्रीम र नरिवलको एक स्पर्शको साथ टुmin्गिन्छ, यसको लागि जानुहोस्।
हजुरआमाको बटर पेस्ट हुन्छ
दालचिनी र सेतो वाइनको स्पर्शको साथ स्वादिष्ट लर्ड पेस्टहरू, बनाउन सजिलो र जीवनभरको समान प्यारो स्वादको साथ।
थर्मोमिक्सको साथ आइसक्रिम: बदामको साथ कारमेल र अखरोटको साथ चीज
धेरै स्वस्थ सामग्रीहरूको साथ दुई धेरै स्थिर फ्रिजहरू। हामीसँग जमिन बदामको साथ कारमेल आइसक्रिम र अखरोटको साथ एक भोकदार मलाईदार चीज चीज आइसक्रीम छ।
लेटस vichyssoise क्लासिक नुस्खा को एक नयाँ संस्करण हो। Thermomix को साथ गर्न सजिलो र तपाइँ तपाइँको गर्मी आहार को लागी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
वायोलेट र ब्ल्याकबेरी क्यान्डी कप क्याक्स
तपाइँको थर्मोमिक्सको साथ एक फरक डेजर्ट, वायोलेट क्यान्डीहरू र मलाई चीज चीजले बनाएको। यो स्वाद र र colorको एक स्पर्शको साथ ब्ल्याकबेरी र क्रीमको साथ छ।
सुपर क्रीमी भरिएका अण्डाहरू
एक गुप्त घटकले भरिएको स्वादिष्ट र सुपर मलाईदार अण्डा: माखन। तिनीहरू सबै भन्दा राम्रो शैतान अण्डा हुनेछन् जुन तपाईंले कहिल्यै स्वाद लिनुभएको छ।
विभिन्न बनावट मा चकलेट को तह संग एक केक। हामी हाम्रो Thermomix मा एक स्वादिष्ट मूस, ganache र एक उत्कृष्ट सॉस बनाउन सिक्नेछौं।
ब्लूबेरी र कागती शीशाको साथ डोनट्स
मलाई स्वादिष्ट बनाउन सजिलो डोनट्स क्रीम चीज र ब्लूबेरीको साथ बनाईएको। तिनीहरू नीबूको स्वादको साथ मिठो र मूल ग्लेजमा कभर छन्।
जुच्चीनी, झींगा र रोमेरीको साथ रमको साथ क्रीमयुक्त चामल
रसिया र झींगाको साथ क्रीमी भात, रम र रोमेरीको स्वाद। रमा र रोमेरीको लागि अरोमा र स्वादहरूको एक ठूलो संयोजन
टूना र चीज पनी अभाकाडो र दही सॉसको साथ
केहि क्वास्डिलाहरू क्लासिक चीज भन्दा फरक छन्: टमाटर, ग्वाकोमोल र दही सॉसको साथ क्रीमी टुना र चीज किक्वाडिल्लाहरू।
यदि तपाईं डेनिस कुकीजको प्रामाणिक स्वाद चाहानुहुन्छ भने यो तपाईंको विधि हो। यो गर्न सजिलो छ, यसलाई आराम चाहिदैन र यो बच्चाहरूसँग गर्न योग्य छ।
न्यानो मकारोनी Mozzarella, टमाटर र avocado, ओरेगानो तेलको साथ
एक उत्कृष्ट oregano तेल संग Mozzarella, टमाटर र एवोकाडो संग अद्भुत तातो मकारोनी। एक प्लेट १०
ताजा ट्युना र मटरको साथ स्टिउड आलु
ताजा ट्युना र मटरको साथ स्वादिलो ​​र रसीला आलु स्टु, धेरै सजिलो र छिटो, एक सप्ताहन्तको लागि मुख्य पकवानको रूपमा आदर्श।
तरकारी, कुखुरा र कालो जैतुनको साथ क्रीमयुक्त चामल
तरकारी, कुखुरा र कालो जैतूनको साथ स्वादिष्ट र धेरै सरल मलाईदार चामल। यो केवल minutes० मिनेटमा तयार हुनेछ, त्यसैले एक एक्सप्रेस नुस्खाको रूपमा यो उत्तम छ।
टमाटर बिना सास
टमाटर बिनाको यो चटनी पारंपरिक जस्तै प्रयोग गर्न सकिन्छ व्यंजन र color र स्वादले पूर्ण बनाउँदछ। तपाइँको Thermomix को साथ केहि मिनेट मा तयार छ।
भेगन निम्बू दही
शाकाहारी निम्बू दहीको लागि यो नुस्खाको साथ तपाईं यसलाई डेसर्ट, कुकीज वा प्रामाणिक कागती स्वादको साथ केक बनाउन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
चार चीजहरू सहित द्रुत कोका
यस चाँडो कोकाको साथ चार चीजहरू तपाईं आफ्नो भोजनमा तरकारीहरू पनि समावेश गर्न सक्नुहुनेछ जबकि तपाईंको मनपर्ने चीजको स्वादको आनन्द लिनुहोस्।
कद्दू सॉस र बेकन संग Gnocchi
कद्दू र बेकन सॉसको साथ Gnocchi ... एक धेरै स्वादिलो, स्वादिष्ट, नाजुक, चिकनी र धेरै सजिलो नुस्खा! र बेकनको टचको साथ।
स्क्विड मासुले भरिएको छ
मासुले भरिएको स्क्विड स्वादिष्ट समुद्री र हिमाली नुस्खा हो जुन तपाईं आफ्नो Thermomix सँग १ घण्टा भन्दा कममा बनाउन सक्नुहुन्छ।
भेरोमा स्टफ भरिएका स्याउहरू
यी स्टीम्ड स्टफ सेबहरूसँग हामी मिठाई जत्तिकै सरल भएका छौं रमाइलो पनि छ रमाइलो पनि छ।
एक tiramisu स्वादिष्ट क्रीम पनीर र लेमन दही को बनेको। यसको मुख्य सामग्री स्वादिष्ट मस्कार्पोन र यसको निम्तीको टच हुन्।
तपाईंले कुर्दै गर्नुभएको तरकारीमा आधारित सफा क्रीम यहाँ छ। यसले तपाइँलाई स्वस्थ तरीकाले क्रिसमसको अत्यधिक मात्रामा प्रतिरोध गर्न मद्दत गर्दछ।
मशरूम र chorizo ​​साथ मकारोनी एक्सप्रेस
थर्मोमिक्सको साथ एक स्वादिष्ट एक्सप्रेस पास्ता नुस्खा: टमाटर, चोरिजो र मशरूमहरूको साथ मकरोनी व्यक्त गर्नुहोस्। बच्चाहरूको मनपर्ने।
बेच्मेल, टर्की र ब्रोकोलीको साथ रिकोटा र पालक टोरटेलिनी
स्वादिष्ट, सजिलो र रसीला पालक र रिकोटा टोर्टेलिनी, पाकेको टर्की र ब्रोकोलीको साथ बाछामेल ससको साथ। जवान र वृद्धको लागि एक वास्तविक सफायागी।
कद्दू र अदुवा प्यूरीको साथ ग्रील्ड सामन
एक धेरै सरल र धेरै स्वस्थ नुस्खा: ग्रिम्ड साल्मन फिललेट्स साथ कद्दू र अदुवा प्यूरी। मुख्य पाठ्यक्रमको रूपमा आदर्श।
मशरूम र अखरोट र्यागआउटको साथ पार्मेनटेयर
च्याउ र अखरोट र्यागआउटको साथ स्वादिष्ट पार्मेन्टीयर। Thermomix को साथ बनाउन को लागी एक सजिलो नुस्खा स्वादहरु र बारीक अधिक शरद lasतु का आनंद।
सुन्तला tahini कुकीज
घरमा हामी यी ताहिनी र सुन्तला कुकीजस्ता स्वादिलो ​​चीजहरू पकाउन सप्ताहन्तको फाइदा लिन्छौं। हामी खाजामा सानालाई आफैलाई व्यवहार गर्न मन पराउछौं। यी सुन्तला ताहिनी कुकीहरू खाजाको समयमा आफैलाई स्वादिष्ट उपचारको लागि योग्य छन्। छिटो र गर्न को लागी सजिलो।
कद्दू र मलाईदार मशरूमको साथ ग्रिन्ड पोलेन्टा
कद्दू र महयुक्त च्याउको साथ ग्रिल्ड पोलेन्टाको यो नुस्खाको साथ हामी ग्लुटन-मुक्त डिशमा शरद ofतुको उत्तम मजा लिन सक्दछौं। जब एसेन कुहेको पनीर र प्यासीनाको च्याउको साथ ग्रिल गरिएको पोलेन्टाको यो थालमा खसिनको स्वादहरूमा लिप्त हुन्छ। Celiacs को लागी उपयुक्त एक शाकाहारी पकवान।